အွန်လိုင်းပေါ် မွာ ဂရက်ထနေန တဲ့ လင်းလင်း ရဲ့ ခွေးဇာတ်ခင်းတဲ့ သီချင်းဟာ ဒီလိုပါ – Let Pan Daily
အွန်လိုင်းပေါ် မွာ ဂရက်ထနေန တဲ့ လင်းလင်း ရဲ့ ခွေးဇာတ်ခင်းတဲ့ သီချင်းဟာ ဒီလိုပါ
အွန်လိုင်းပေါ်မွာ ဂရက်ထနေနတဲ့ လင်းလင်း ရဲ့ ခွေးဇာတ်ခင်းတဲ့ သီချင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နွစ်ဝန်းကျင်ကတည်းက ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ် အွန်လိုင်းပေါ်မှာဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေတဲ့ Rocker ကြီး လင်းလင်းက ခွေးဇာတ်ခင်းတဲ့ သီချင်းကိုသီဆိုလိုက်ပြီး ကိုယုန်လေး ကို ဒဲ့ဖဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီး ပြန့်နှံနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဆိုပါ သီချင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်ဝန်းကျင်ကတည်းက ထွက်ပေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပီး အခုမှထွက်လာတဲ့ သီချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Rocker ကြီးလင်းလင်း ကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် ဒေါက်တာမလေး ချစ်သုဝေနဲ့ အတူ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းလှတဲ့ သမီးလေး ခေတ်နဲ့ သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော်ကြီးပါ…အကြမ်းစား rocke တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ကို ထိုးနှပ်လေ့ရှိတဲ့ သဘာဝအဆိုတော် တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်…
မကြာသေးမှီက ဆိုရှယ်မှာ အရမ်းကို ဝေဖန်မှုတွေ မြင့်တက်နေ တဲ့ ကိုယုန်လေးရဲ့ MTV နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူဖြစ်ဖို့ အဆင့်မမှီဘူးဆိုပြီး ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်လို့ သိရပါတယ် …. လူတိုင်းဟာ မျက်မမြင်ပုဏ္ဍားတွေပါ ။ ဘယ်လိုမျိုးပဲ ရှုထောင့် အမျိုးမျိုးက မြင်ကြပါစေ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဘယ်အရာမဆို သုံးတတ်ရင်ဆေးဆိုတာပါပဲ ။
အှနျလိုငျးပျေါ မှာ ဂရကျထနနေ တဲ့ လငျးလငျး ရဲ့ ခှေးဇာတျခငျးတဲ့ သီခငျြးဟာ ဒီလိုပါ
အှနျလိုငျးပျေါမှာ ဂရကျထနနေတဲ့ လငျးလငျး ရဲ့ ခှေးဇာတျခငျးတဲ့ သီခငျြး လှနျခဲ့တဲ့ ၅နှဈဝနျးကငျြကတညျးက ထှကျပျေါခဲ့တာဖွဈ အှနျလိုငျးပျေါမှာဝဖေနျမှုမွငျ့တကျနတေဲ့ Rocker ကွီး လငျးလငျးက ခှေးဇာတျခငျးတဲ့ သီခငျြးကိုသီဆိုလိုကျပွီး ကိုယုနျလေး ကို ဒဲ့ဖဲ့လိုကျတယျဆိုပွီး ပွနျ့နှံနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆိုပါ သီခငျြးဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ၅နှဈဝနျးကငျြကတညျးက ထှကျပျေါခဲ့တာ ဖွဈပီး အခုမှထှကျလာတဲ့ သီခငျြးတော့မဟုတျပါဘူး။ Rocker ကွီးလငျးလငျး ကတော့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ အခဈြတျော အဆိုတျော သရုပျဆောငျ ဒေါကျတာမလေး ခဈြသုဝနေဲ့ အတူ ဘဝကိုဖွတျသနျးနပွေီး ခဈြစရာကောငျးလှနျးလှတဲ့ သမီးလေး ခတျေနဲ့ သဈကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အဆိုတျောကွီးပါ…အကွမျးစား rocke တှနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျကို ထိုးနှပျလရှေိ့တဲ့ သဘာဝအဆိုတျော တဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ…
မကွာသေးမှီက ဆိုရှယျမှာ အရမျးကို ဝဖေနျမှုတှေ မွငျ့တကျနေ တဲ့ ကိုယုနျလေးရဲ့ MTV နဲ့ ပတျသတျပွီး လူဖွဈဖို့ အဆငျ့မမှီဘူးဆိုပွီး ဝဖေနျခဲ့ပါတယျလို့ သိရပါတယျ …. လူတိုငျးဟာ မကျြမမွငျပုဏ်ဍားတှပေါ ။ ဘယျလိုမြိုးပဲ ရှုထောငျ့ အမြိုးမြိုးက မွငျကွပါစေ သခြောတာတဈခုကတော့ ဘယျအရာမဆို သုံးတတျရငျဆေးဆိုတာပါပဲ ။
ဆကျဆီ ကကြ အလနျးစား ပုံစံ ကပွထားတဲ့ မမသငျဇာ ရဲ့ ဗီဒီယို
မော်လမြိုင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် သူမချစ်တဲ့ အခြားမြို့တစ်မြို့ကို ပြောပြ ခဲ့တဲ့ ” မေပန်းချီ”
အခဈြကို ကိုးကှယျမိလို့ နောငျတအကွီးကွီး ရနတေယျဆိုတဲ့ နတေိုး ရဲ့ ရညျးစားဟောငျး ပနျးပနျ (ရုပျသံ)
ရငျဖိုစရာ ကောငျးလှနျးတဲ့ TIK TOK ဆော့ထားတဲ့ သှနျးဆကျ ရဲ့ အမိုကျစား ဗီဒီယို